NUG ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျက ဒါမြိုးတှပေိုငျတယျ ဆိုတာ - Han Nyein Oo
ဟုတျလို့လား …..လေ ပဲ မို့ လား တဲ့…
ဦးရညျမှနျရဲ့ပွောစကားကို အခွခေံပွီး…လမေို့လား လမေို့လား နဲ့…..သူ့လူရော ကိုယျ့လူရော လာမေးနကွေတာက…စိတျထဲ သဘာဝမကတြဲ့အထိ ဖွဈရတယျ။
စကစဘကျက NUG ဟာ လေ အစိုးရလို့ပွောခဲ့တဲ့အပျေါမှာ…အခြိနျကပဲ သကျသပွေခဲ့တာကို သိမှာပါ။မအလနဲ့တရုတျရဲ့လှညျ့ကှကျနဲ့အာစီယံရဲ့ ၄လ အပဈရပျရေး
နာရီပိုငျးအတှငျး D-day ကွငွောပေးလိုကျတာတဲ့…NUGရဲ့ ရဲရငျ့ပွတျသားမှုနဲ့ တိကတြဲ့​ပလနျရှိနမှေုက…သံသယဖွဈစရာကို မလိုကွောငျး ပွသလိုကျတာပါ။
ရုရှ၊တရုတျနဲ့အာစီယံတို့ မအလဘကျမှာရှိနတေယျဆိုတာကို သိလြှကျနဲ့…အခွနေအေရ ပွညျတှငျးစဈ စဖို့အတှကျD-day ရကျကို ကမ်ဘာသိသတျမှတျပေးလိုကျတဲ့NUGရဲ့ အစီစဥျဟာ….ခမြားတို့ပွောတဲ့ လေ လိုငျး ထဲက အစိုးရသာဆိုလြှငျ..မနထေဲ့ကပဲ… မွနျမာပွညျ ပွာပုံဖွဈနပေါပွီ။
လေ မို့ လား…ဆိုတဲ့ အမေးနဲ့လေ ပါ ကှာ ဆိုတဲ့ အပွောတှေ နောကျမှာ…ဒီ လေ ကိုပဲ ကွောကျပွီး….မိအပျနိုငျ မစားနိုငျ ဖွဈနရေတာကမအလနဲ့စဈအုပျစုအပွငျ တရုတျကွီးပါ ပါတယျ။
မနစေ့,လိုကျတဲ့ ဒီဒေးကွောငျ့….ရုရှမှာရောကျနတေဲ့ စိုးဝငျးမိုးမလငျးခငျပွနျပွေးလာရတယျ။ဖကျဆဈဝါဒသမားတှမေို့ ဘယျလိုယုတျမာတဲ့နညျးဗြူဟာတှသေုံးပွီး ထှကျလာမလဲတော့
မသိသေးဘူး။ဒါပမေဲ့…NUGနဲ့PDF ဟာ အခြာမဟုတျဘူးဆိုတဲ့မကျဆကေ့တော့ သူတို့ဆီကိုရောကျနပွေီ။လတေပျလား လေ တပျ လား သိခငျြရငျတော့…အရငျကလို ဝီဝီမွညျနတေဲ့အသံထှကျနတေဲ့ မီးကြိုးမောငျးပွတျယာဥျတှသေုံးပွီး အဓမ်မ စကွညျ့လိုကျ….
အိုငျ သေး ပမေဲ့….ငါးကွီးတှေ ရှိနကွေောငျးပွရမဲ့အခြိနျရောကျနပွေီမို့….ကြုပျတို့က D-day ကို သတျမှတျလိုကျတာ။ဒါကွောငျ့….လေ ဆိုရငျ လနေဲ့ တုနျ့ပွနျ့ဖို့ အသငျ့ပါလို့….
👍👍👍 သံပါးစပျ 8.9.2021
ဟုတ်လို့လား …..လေ ပဲ မို့ လား တဲ့…
ဦးရည်မွန်ရဲ့ပြောစကားကို အခြေခံပြီး…လေမို့လား လေမို့လား နဲ့…..သူ့လူရော ကိုယ့်လူရော လာမေးနေကြတာက…စိတ်ထဲ သဘာဝမကျတဲ့အထိ ဖြစ်ရတယ်။
စကစဘက်က NUG ဟာ လေ အစိုးရလို့ပြောခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ…အချိန်ကပဲ သက်သေပြခဲ့တာကို သိမှာပါ။မအလနဲ့တရုတ်ရဲ့လှည့်ကွက်နဲ့အာစီယံရဲ့ ၄လ အပစ်ရပ်ရေး
နာရီပိုင်းအတွင်း D-day ကြေငြာပေးလိုက်တာတဲ့…NUGရဲ့ ရဲရင့်ပြတ်သားမှုနဲ့ တိကျတဲ့​ပလန်ရှိနေမှုက…သံသယဖြစ်စရာကို မလိုကြောင်း ပြသလိုက်တာပါ။
ရုရှ၊တရုတ်နဲ့အာစီယံတို့ မအလဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကို သိလျှက်နဲ့…အခြေနေအရ ပြည်တွင်းစစ် စဖို့အတွက်D-day ရက်ကို ကမ္ဘာသိသတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့NUGရဲ့ အစီစဉ်ဟာ….ခများတို့ပြောတဲ့ လေ လိုင်း ထဲက အစိုးရသာဆိုလျှင်..မနေ့ထဲကပဲ… မြန်မာပြည် ပြာပုံဖြစ်နေပါပြီ။
လေ မို့ လား…ဆိုတဲ့ အမေးနဲ့လေ ပါ ကွာ ဆိုတဲ့ အပြောတွေ နောက်မှာ…ဒီ လေ ကိုပဲ ကြောက်ပြီး….မိအပ်နိုင် မစားနိုင် ဖြစ်နေရတာကမအလနဲ့စစ်အုပ်စုအပြင် တရုတ်ကြီးပါ ပါတယ်။
မနေ့စ,လိုက်တဲ့ ဒီဒေးကြောင့်….ရုရှမှာရောက်နေတဲ့ စိုးဝင်းမိုးမလင်းခင်ပြန်ပြေးလာရတယ်။ဖက်ဆစ်ဝါဒသမားတွေမို့ ဘယ်လိုယုတ်မာတဲ့နည်းဗျူဟာတွေသုံးပြီး ထွက်လာမလဲတော့
မသိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့…NUGနဲ့PDF ဟာ အချာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မက်ဆေ့ကတော့ သူတို့ဆီကိုရောက်နေပြီ။လေတပ်လား လေ တပ် လား သိချင်ရင်တော့…အရင်ကလို ဝီဝီမြည်နေတဲ့အသံထွက်နေတဲ့ မီးကျိုးမောင်းပြတ်ယာဉ်တွေသုံးပြီး အဓမ္မ စကြည့်လိုက်….
အိုင် သေး ပေမဲ့….ငါးကြီးတွေ ရှိနေကြောင်းပြရမဲ့အချိန်ရောက်နေပြီမို့….ကျုပ်တို့က D-day ကို သတ်မှတ်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်….လေ ဆိုရင် လေနဲ့ တုန့်ပြန့်ဖို့ အသင့်ပါလို့….
👍👍👍 သံပါးစပ် 8.9.2021